कस्ता व्यक्तिहरुले खान हुँदैन अनार ?
मुख्य पृष्ठखानपान स्वास्थ्य जीवनशैलीकस्ता व्यक्तिहरुले खान हुँदैन अनार ?
हरेक कुराको फाइदा संगसंगै बेफाइदा पनि हुने गर्छ । हामीले कहिलेकाही शरीरलाई फाइदा हुन्छ भनेर खाने फलफुल वा सागसब्जीले हामीलाई उल्टै नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तै, शरीरमा विभिन्न रोगले सताईरहेको छ भने हामीले अनार खाने गर्नु हुदैन । अनारले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा गर्ने गर्छ । अनार बिरामीलाई समेत खुवाइने गरिन्छ । यसले हाम्रो शरीरमा रगतको मात्रा बढाउने काम गर्छ ।
प्रत्येक दिन एउटा दाना अनार खाने गर्दा हामीलाई यसले क्यान्सर हुने सम्भावनाबाट जोगाउने गर्छ । तर, कुनै कुनै अवस्थामा अनारको सेवनले हामीलाई स्वास्थ्यमा असर समेत गर्न सक्छ । अनारमा सुगरको मात्रा धेरै भएको कारणले यसले हाम्रो शरीरको ब्लड सुगर लेवललाई वृद्धि गर्ने काम गर्छ । मधुमेह रोगीले अनारको सेवन गर्नु उचित हुदैन ।
अनारमा फाईबर्सको मात्रा अधिक पाइने हुदा कब्जियत, पेटमा ग्यास तथा पेट सम्बन्धि रोगहरु निम्त्याउने भएकाले कब्जियत भएको मान्छेले अनारको सेवन गर्नु हुदैन । दम भएका रोगीहरुले अनार खादा झन् दम बढ्ने हुँदा दम रोगीले अनारको बिर्सेर पनि सेवन गर्नु हुदैन । आफ्नो तौल घटाउन वा नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि धेरै प्रयास गरिरहनु भएको छ भने अनारको सेवन गर्नु हुदैन ।
अनार खादा तौल घट्नुको साटो अझै बढ्ने गर्छ ।अनारमा विभिन्न एंटी अ‘ाक्सीडेंट्सहरु धेरै मात्रामा हुने कारण छिट्टै प्रेसर लो हुने भएको कारणले गर्दा प्रेसर लो हुने ब्यक्तिहरुले अनारको सेवन गर्नु हुदैन । साथै अनारमा पाइने एंजाइम्सले हाम्रो कलेजोले उत्पादन गर्ने एंजाइम्ससंग मिलेर हाम्रो शरीरमा नकारात्मक असर पुर्याउने हुनाले कलेजोमा समस्या देखा परेका व्यक्तिले अनार खानु उचित मानिंदैन ।
यदि हामीहरुले उक्त रक्तचाप कम गर्ने वा कोलेस्ट्रोल कम गर्ने औषधिको सेवन गरिरहेका छौं भने हामीले त्यस्तो बेलामा अनार खाने गर्नु हुदैन । अनार खादा हामीले खाएको औषधिले हाम्रो शरीरमा काम गर्दैन ।